Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana | Site officiel du collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana
FANAMBARANA AVY AMIN’NY HETSIKY NY MPITONDRA FIVAVAHANA
... Manoloana ny fijalian’ny vahoaka Malagasy Mpiray tanindrazana aminay , izahay Mpitondra Fivavahana mivondrona ato amin’ny HMF dia tena tsy tafandrimandry tanteraka , noho ny fahitàna izato làlana izoran’ny firenena mankany amin’ny fahasimbàna sy ny fahapotehan’izay kely sisa mbola hananana ; koa manao izao fanambarana izao izahay , ho fanamafisanay ny fandraisanay andraikitra ho an’ny vahoaka mijaly sy ampijaliana ...
...Tsy mankasitraka ny fampahoriana sy ny fampiasan-kery amin’ny vahoaka Andriamanitra , noho izay mety ho tombontsoa arovan’ny Mpitondra (Jeremia 22 :13,17) :ary izay manao izany ho filan-karena dia halan’i Jehovah ; koa melohinay sy toherinay amin’ny fanahinay rehetra ny fampiasan-kery sy ny fitondrana fitaovam-piadiana mahery vaika hamoretana ny vahoaka ary mainka loza ny fampirisihana sy ny fanambazana vola kely ireo mpiray tanindrazana mba hitora-bato ny olona nanao fihetsiketsehana ; ho pitik’afo sanatria hitondra mankany amin’ny ady an-trano izany koa manainga ny manam-panahy rehetra hanameloka izany fomba mamoafady izany ! ...
FANAMBARANA_HMF_280512.doc 34 Ko
HMF : fahasahiana no dingana manaraka (+vidéo)
Kihon-dalana lehibe ho an’ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana ny vanim-potoana ankehitriny. Mitombo mantsy ny andrikitra iantsorohan’izy ireo amin’ny fikatsahana ny fampijoroana ny fahamarinana izay antom-pisian’ny hetsika. Tao anatin’ny herinandro vitsy dia nijoro ny vondron-kery lehibe iray izay eo ambany fandrindran’izy ireo ka ahitana ankolafy, fikambanana ary sindika efa dimapolo mahery. Izany dia ho valin’ny antso izay nataon’ny HMF iray volana lasa izay. Ny hametraka tetezamita vaovao andresen’ny tombontsoa iombonana no tanjon’izy ireo ka ny fanambarana ny hery no lalana entiny manatratra izany.
20 Mey 2010 – 20 Mey 2012
Fampirantiana sary no nentin’ny HMF nahatsiaro ny andron’ny 20 Mey izay fitsingerenan’ny tolona am-bavaka natao teny Fort-Duchesne. Roa taona lasa tokoa izay dia notafihin’ny hery famoretana ny vahoaka tonga nivavaka ho an’ny Firenena teny amin’ny Mozoley. Nanolo-tanàna ny vahoaka tamin’izany ny zandary tao amin’ny FIGN izay nitaky ny fahamarinana ihany koa mikasika ny vola tambin-karaman’izy ireo izay very an-javona. Maro ny naratra sy nitondra takaitra tamin’izany ary nisy koa ny namoy ny ainy. Isan’ireny ny mpitandrina Rivo Ranaivo Harison izay lavon’ny balan’ny mpihetraketraka teo am-perinasa tamin’io andro io.
HMF : vonona hitarika hetsika ! (+vidéos)
« Tsy hangina aho noho ny amin’i Ziona » satria « ny fahamarinana manandratra ny Firenena ». Nanambara am-pahibemaso ny fahavonan’izy ireo hitarika izay hetsika mety hatao hampanjakana ny fahamarinana ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana androany. Tao anatin’ny fotoana nijoran’ireto mpiandry ondrin’Andriamanitra ireto dia tsy nitsahatra nanameloka ny tsy fahamarinana ampanjakaina eto Madagasikara izy ireo. Ankehitriny anefa dia tsy hijanona amin’izany intsony izy ireo fa nivaky ny fahavononany hitarika raha toa ka « action » tsy mifanohitra amin’ny foto-kevitra maha-mpitondra fivavahana azy ireo no takian’ny vahoaka.
Tao anatin’ny fanambarana nataon’ny HMF dia nanao antso avo farany ho an’ny mpitondra amin’izao fotoana izy ireo mba tsy hinia mikipy manoloana ny zava-mitranga indrindra ny fahorian’ny mpiray tanindazana. Tsy mandry fahalemana ny vahoaka nefa sady mandry fotsy, maro ny Raiamandreny tsy mahavita mandefa ny zanany any an-tsekoly intsony satria na ny sakafo aza ambany foitra. Amin’ny HMF dia « tsy ny fifanarahana vita sonia no olana fa ny olona nanao fanekana nefa mahita fanamarinan-tena tsy hanatanterahana izany ».
Aoka tsy hihemotra intsony …
Mila sahy mandray andraikitra ny rehetra hampanjakana ny fahamarinana hoy ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana. Manahy mafy ireto mpitondra fivavahana ireto amin’ny teti-dratsy fanakorotanana etsy sy eroa amin’izao fotoana. Toa mifono hevitra handefasana miaramila frantsay eto Madagasikara izy ireny. Raha ny resaka baomba fotsiny ohatra dia toa eny amin’ny toerana misy ifandraisana amin’ny teratany frantsay no nisehoan’izany. Melohin’izy ireo koa ny fisian’ny miaramila frantsay mandray anjara amin’ny fifandaminana indrindra amin’ny hetsika tian’ny vahoaka hatao am-pilaminana. Nomarihin’ny pastsera Andriamisata Roger fa tsy nasiana resaka tamin’ny fotoam-pitsarana ny raharaha FIGN mihitsy ny nahalavo ny mpitandrina iray izay tao amin’ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana. Narahabaina kosa moa ny Pastera Valisoa Rafanonerantsoa izay afaka madiodio tamin’ity raharaha ity.
HMF : Vavaka sy firaisan-kina no vahaolana (+vidéos)
Vahaolana roa no hitan’ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana hamahana ny krizy. Tsy mbola mety mivaha manko ny krizy satria mikatso ny resaka politika ary tsy ahitam-bahaolana ny fanatanterahana izay mba fifanarahana natao sonia. Ny vahoaka anefa tena efa tsy mahita iantsapazana intsony ary efa mila hamoy fo mihitsy. Fanamafisana ny vavaka no vahaolana voalohany hitan’ny HMF fa tena hamahana ny krizy haingana. Tokony tena mifantoka tanteraka amin’izany ny vahoaka Malagasy ary manokana fotoana hanaovana izany mba tsy ho vavaka mihambahamba no hatao fa tena hametraka ny Firenena amin’Andriamanitra.
Tsy hitsahatra amin’izany ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana ary manome fotoana ny mpiray tanindrazana sahady ny sabotsy 05 May izao manomboka amin’ny 01 ora tolakandro eny amin’ny « gradin » FJKM Anosivavaka Ambohimanarina. Fotoan-dehibe manana ny maha-izy azy izany ho an’ny olona rehetra mandala ny fahamarinana. Ny faharoa dia ny fikatsahana hatrany ny hanamafisana ny firaisan-kina sy ialana amin’ny fivakisan’ny fiaraha-monina Malagasy. Misy ny ezaka izay efa ataon’ny HMF hanatontosana izany ary haseho vahoaka izany amin’ny fotoana mampety azy.
Ny tody tsy misy …
Maro ny endri-javatra efa manamarina ny fahalemen’ny « tsy marina » sy izay rehetra mpomba azy ankehitriny. Isan’ireny ny ady an-trano izay iainan’izy ireo ka tonga any amin’ny fampidirana am-ponja izany ankehitriny satria manjaka loatra ny fitiavan-tena sy ny alahelon-tseza. Ny andaniny ao anatin’izany dia sahy miantso ny vahoaka hanampy azy. Toy ny tsy tsaroany fa tao anatin’ny roa taona dia izy ireo no nanenjika ny vahoaka sy izay rehetra tsy nitovy hevitra taminy ary namboly fifankahalana mihitsy. « Hararaoty ny andro azo anaovan-tsoa » hoy ny fitenena. Amin’ny fotoana hisian’ny olana mantsy tsy fantatra izay afaka mamonjy. Izany no antony itorian’ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana ny fahamarinana mba hizotra amin’ny lalana mahitsy hatrany ny Malagasy ary hanankina ny fiainana amin’Andriamanitra. Amin’ny fotoana hahatanterahan’izany mantsy dia ho rehareha ilay hoe « dia ho tany sambatra ilay Madagasikaranay ».
FANEHOAN-KEVITRA AVY AMIN’NY NY HETSIKY NY MPITONDRA FIVAVAHANA
Ny hetsiky ny mpitondra fivavahana dia mankasitraka feno ireo izay efa nijoro sy mbola hijoro hatrany hiaro sy hampihatra ny fahamarinana eto amin’ny firenena. Nanao antso avo tokoa izahay ny hijoroan’ny tsirairay avy any amin’ny sehatra misy azy avy, mba hitaky izany fahamarinana izany hatrany, izany no nahatonga ny HMF nanao ny teny filamatra hoe «MIJOROA RAHA OLO-MARINA ».
Mankasitraka feno ny nataon’ny Mouvance ZAFY Albert ny HMF, tamin’ny fahasahiana nananany nijoro sy nitaky ny fahamarinana ka nangataka indray ny hijerena ireo « Grands dossiers » izay efa nitoriany ny tompon’Andraikitra ankehitriny eto amin’ny firenena teny amin’ny fitsarana nefa toa zary nampanginina ihany teo aloha teo.
Manoloana izany dia mangataka ny hijoroan’ireo tompon’andraikitra ao amin’ny fitsarana ihany koa ny HMF mba hijoro ka ho sahy marina tokoa hikatsaka ny fahamarinana momba ireny Grands dossiers ireny. Efa nilokaloka tokoa mantsy ny fianakaviamben’ny fitsarana tamin’ny fikaonan-doha farany izay nataony fa hikatsaka ny fahamarinana tokoa ary hampiatra izany sy tsy handray teritery na avy aiza na avy aiza eto amin’ny firenena. Manainga ny rehetra ary ny HMF mba samy ho tompon’andraikitra amin’ny fampiharana io fahamarinana io.
NY FAHAMARINANA MANANDRATRA NY FIRENENA
NY HETSIKY NY MPITONDRA FIVAVAHANA
Fitondrana Firenena: sitrapon’Andriamanitra ny miala am-panajana (+vidéo)
Nomarihin’ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana tao anatin’ny fanambarana novakiana tao nandritran’ny fotoam-bavaka teny Anosivavaka androany fa mahasoa ny Firenena ny fisian’ny fahamarinana ary tsy hitsahatra hitaky izany izy ireo. Arak’izany dia anterin’ny HMF fa tsy tokony ho lalaovina ny hoavin’ny taranaka. Ny fananatenarahana ny teny nomena sy ny fampanantenana dia isan’ny fahamarinana fototra sy fifanajana eo amin’ny fiaraha-monina misy ny tsirairay.
Isan’ny nampanantenain’ny mpitondra fony teny an-dalam-be ny fahafahana maneho hevitra an-kalalahana sy ny fahazahoana miakatra amin’ny hainoamanjerim-panjakana saingy tsy mbola misy tanteraka izany ankehitriny. Ny fangejana ny fananan’ny fiangonana izay fitaovana itoriany ny tenin’Andriamanira dia tsy ankasitrahiny. Isan’ny mbola iharan’izany ny Radio fahazavana sy ny Kianjan’Antsahamanitra izay an’ny FFPM saingy tsy azo anaovana hetsika an-kalalahana. « Manana olona afaka hanatanteraka izany ny Tompo » hoy ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana « ka rehefa tsy vonona hanao izany ianareo dia sitrapon’Andriamanitra ny miala am-panajana ».
Mizotra mankaiza isika ? Aiza ny olo-marina ? Fanontaniana napetraky ny HMF ireo manoloana ny toe-javatra iainan’ny Malagasy amin’izao fotoana. Ny krizy lalina lalovan’ny Firenena dia mitaky ny fandraisana andraikitra avy amin’ny tsirairay. Avoitran’ny sehatra isanisany anovozana fifanakalozana ny olom-pirenena ka tokony afaka mitarika sy mifananetana amin’ireo mpiray donakafo aminy. Nankasitrahin’ny HMF ireo fikambanana izay efa nifanantona tamin’izy ireo. Mankahery ireo izay efa miezaka mijoro amin’ny fahamarinana ihany ko izy ireo satria « ny fahamarinana no manandratra ny Firenena ». Araka ny voalaza ao amin’ny Ohabolana 12, 26 koa anefa dia adidin’izayresy lahatra hijoro amin’ny fahamarinana ny mitarika ny namany mba hiara-dia aminy ao anantin’ny fampijoroana izany. Nambaran’ireo mpitondra fivavahana mivondrona anatin’ny hetsika ary fa misokatra tanteraka amin’izay endrika fifanakalozana sy fiaraha-miasa izy ireo mba hivondoona ho hery matanjaka iray ny zanaky ny fahamarinana hampitsahatra ny famiraviran’ny ratsy fanahy an’i Madagasikara.
HAFATRA_HMF.pdf 273.25 Ko
HMF : miverina indray ny fampitahorana ... (+vidéos)
Nivoitra tamin’ny hafatra nampitain’ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana androany fa « mila mitambatra ny mpandala ny fahamarinana rehetra hivoahana amin’izao krizy mamaivay izao ». Niantso izay mety fikambanana na Ankolafy na hetsika rehetra izy ireo mba hisian’ny fifanatonana haingana ahafahana manambatra ny hery hiadiana amin’izao tsy rariny eto amin’ny Firenena izao. Araka ny efa nambaran’izy ireo ombieny andro vitsy izao dia vonona tanteraka izy ireo ny hitarika ny fandrindrana izany fiombonana izany satria tsy misy ankoatra ny fahamarinana no ahafahana manandratra ny Firenena.
Sary Hetsika androany
Ankoatra izay dia niantso ny mpitondra fivavahana ihany koa ny HMF hivoaka ny fitorianan anaty rindrina efatra. Nambaran’izy ireo fa fotoana tokony « hamangiana ireo naringana izao » ary vaninandro tokony hijoroana hitaiza ny ondry amin’ny fahamarinana. Nangataka ny fanomean-tanan’ny isan-tokony moa ireto mpitondra Fivavahana ireto ho fametrahana izany fahamarinana izany sy hirosoana amin’ny fifamelana sy ny fihavanana tsy misy fihatsaram-belatsihy. Isan’ny mbola namafisin’ny HMF tao anatin’ny hafatra ihany koa ny fitakiana ny fanokafana ny Radio Fahazavana satria an’ny Fiangonana izy io ary izay manampim-bava ny Fiangonana dia toy ny manao izany amin’Andriamanitra.
Tsy hihemotra …
Fantatra nandritra ity hetsika androany teny Anosivavaka ity ihany koa fa dia misesy indray ny fampitahorana ireo mpandrindra ny HMF amin’izao fotoana. Ny Pastera Valisoa Rafanonerantsoa manokana dia nahazo fampitahorana haverina am-ponja indray taorian’ny fijoroan’ny hetsika hanamafy ny fitakiana ny fahamarinana. Ny hainoamanjery rehetra ihany koa dia nahazo fampitandremana tsy handefa ny fanentanana momba ity fotoam-bavaka androany ity saingy tsy nahasakana ny mpino izany ary tsy hampihemotra ny Hetsiky ny Mpitondra FIvavahana ihany koa araka ny fanomezan-toky nataon’izy ireo androany.
HMF_030312.pdf 197.27 Ko
HMF : Antso … mba tsy hisian’ny rà mandriaka indray … (+vidéos)
« Tsy mitarika mankany amin’ny fifampiresahana ny zava-misy ankehitriny » hoy ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana « fa manamafy ny fifandrafesana ». Nambaran’ireto mppitondra fivavahana ireto fa tondro maro eo amin’ny faraha-monina sy ny politika no manamarina fa mizotra mankany amin’ny fifandonan’ny samy Malagasy ny zava-misy ankehitriny. Na ny fifamaliana eny amin’ny hainoamanjery isan-karazany na ny fifankahalana any amin’ny fianakaviana fa indrindra ny tsindrio fa lavo an-jambany ataon’izay milaza fa tompon’ny fahefana dia tokony ho fampitandremana ho an’ny manam-panahy avokoa.
Manao antso avo ary izy ireo ho an’ny olom-pirenena izay mandala ny fahamarinana mba handray ny andraikitra manandrify azy ireo hisorohana izany. Namafisin’ny HMF fa tsy misy ankoatra ny fifamelana faobe na « grand pardon » no hahafahana miala amin’izao krizy izao saingy mila ny fandavan-tenan’ny tsirairay izany mba tsy hiandry « fefiloha vaky » vao hitady vahaolana.
« Tsy hitsahatra hivavaka … »
Ainga vaovao avy hatrany no ihatrehan’ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana izany lafin’andraikitra hafa miandry azy ireo izany ka nanteriny fa vonona hitarika izay tolona hatrehana hampanjakana ny fahamarinana izy ireo na dia ho sorona noho ny amin’izany aza. Rahampitso 03 Martsa 2012 ary dia eny amin’ny Kianjan’ny FJKM Anosivavaka Ambohimanarina ny fotoam-bavaka lehibe ho an’i Madagasikara sy ny Malagasy. Toy ny fanaon’izy ireo hatrany dia ny fitoriana ny tenin’Andriamanitra no tena hibahana amin’izany ka isan’ny foto-kevi-dehibe itarihana ny fampianarana izay voasoratra ao amin’ny Lioka 18, 01 manao hoe : « … fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka ».
Nambaran’ireo mpandrindra ny hetsika fa tamin’ity indray mitoraka ity dia izay hahatanteraka ny fotoana no tena nilofosana fa tsy sanatria ny nifandrirarira tamin’ny manam-pahefana momba ny fazahoan-dalana. Izany no nahatonga ny fihaonana hatao any amin’ny toerana manokana izay fananan’ny FJKM Anosivavaka.
23/02/2012 : HMF : hanongotra ny fototry ny tsy fahamarinana
Nivoaka tamin’ny fahanginan’ny ny Hetsiky ny Mpitondra fivavahana. Raha ny fahitan’ny mpitazana azy manko dia nangina volana maro izy ireo na dia niasa hatrany aza tao anatin’izany. Araka ny fanazavan’ny Pastera Roger Andriamisata dia manohy ny fahavononana hitaky ny fahamarinana izy ireo ary mbola nitombo avo roa heny izany fahavononana izany satria tena efa latsaka anaty lavaka mangitsokitsoka ny Firenena. Isan’ny tsy fahamarinana izay melohin’ny HMF voalohany ny tsy mbola fahataperan’ny tetezamita hatramin’izao. Amin’izy ireo dia tsy tokony nihoatra ny 12 volana izany toy ireo tetezamita efa nandalovan’i Madagasikara hatrizay.
Ankoatra izay dia isan’ny tena mampikatso ny famahana ny olana ihany koa ny fizirizirian’ny sasany tsy mety mananatanteraka ny fifanarahana natao sonia. Raha manana finiavana hamaha ny krizy manko ny rehetra dia tsy tokony ny fitiavan-tena sy ny fitiavan-tseza no mialoha lalana ny fitiavan-tandrindrazana sy ny fitsinjovana ny mpiara-belona.
"Rovitra ny lamba irakofana …"
Na ny politika, na ny toe-karena, indrindra fa ny sosialy dia tsy mandeha amin’ny laoniny intsony araka ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana. Toy ny tsy misy fanjakana intsony eto amintsika noho ny gaboraraka misy amin’ny fananam-bahoaka sy ny heram-pirenena. Noraisin’izy ireo ohatra tamin’izany ny lalam-pihariana volamena eto Madagasikara. Raha ny fantatra mantsy dia misy volamena manodidina ny 10 Taonina no mivoaka an’i Madagasikara isan-taona. Araka ny fampieritreretana nentin’ny Pastera Ramamonjisoa Philibert dia vola tsy toko tsy forohana izany raha toa ka miditra marina any anaty kitapom-bolam-panjakana saingy tsy hita izay lalany. Ankoatra izany dia fantatra ihany koa fa roa isan’andro raha kely ny fanafihana mitam-piadiana eto an-drenivohitra nefa ny hery famoretana mandany andro manenjika izay manohitra ny ao Ambohitsorohitra. Azo visavisaina amin’izany ny any ambanivolo any raha ny tanan-dehibe aza mandry tsy lavo loha.
Roa ny vahaolana
Ny fifamelana faobe na « grand pardon » no isan’ny vahaolana naroson’ireto mpitondra fivavahana ireto. Fototra ahafahana manohy na manomboka ny tena fifampiresahana izany hoy ny HMF ka tokony ilofosan’ny olom-pirenena rehetra. Tsy eken’izy ireo anefa ny fialokalofana anaty andrim-panjakana na ambany fifanarahana politika izay miteraka tsy maty manota eto amin’ny Firenena. Noho izany dia takian’izy ireo ny « fanatsikafonana » ny hadisoana sy ny tomponantoka rehetra hatramin’ny fahaleovan-tena no mankaty. Nanome toky ny HMF fa hanao ny fanadihadiana rehetra ahafahana manomboka an’izany tsy hiverenan’ny krizy intsony any aoriana.
Ny vahaolana faharoa izay tsy nasian’izy ireo itatra na kely aza dia ny famongorana amin’ny fotony izay fototry ny tsy fahamarinana ka mampitarazoka ny krizy eto amintsika. Nandritra ny valan-dresaka dia efa nanentana ny vahaoaka izy ireo hahatsiaro-tena ka sahy handray andraikitra ho fanavotana ny tanindrazana. « Vonona izahay, raha ialin’ny vahoaka, hitarika izany tolona izany » hoy ihany ny Mpitondra fivavahana « ary izay ilay fiovana hanamafy ny fitakiana satria ny fahamarinana no hanandratra ny Firenena ».
Araka ny fanamarihana nentin’ny HMF dia tsy misy ifandraisana amin’ny Fiombonan’ny Fiangonana Kristianina eto Madagasikara na FFKM akory ny hetsika ataon’izy ireo. Notsoriny anefa fa samy Raiamandreny izy ireo ka manana andraikitra amin’ny mahazo ny ondriny saingy ny fomba hanatanterahana izany no maro lafy. Manome fotoana ny vahoaka Malagasy ary ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana amin’ny Sabotsy 03 Martsa 2012 ho avy izao amin’ny fotoam-bavaka lehibe hitrotroana an’i Madagasikara sy ny Malagasy mba hiala amin’izao haizina izao.
Miala tsiny indrindra amin'ny tsy fahampian’ny vaovao zaraina amintsika andro vitsy izao noho ny olana misy eo amin'ny tambazotra "internet" eto Madagasikara. Hiverina amin'ny laoniny avy hatrany izany raha vantany vao mivaha io olana io. Misaotra antsika rehetra amin'ny fahatokisana ny Collectif-gtt.org.
HMF230212.pdf 186.73 Ko